सभापतिको उम्मेदवार बन्न देउवाद्वारा गृहकार्य सुरुः निधिले पनि सभापतिका लागि दाबि पेस गरे «
प्रकाशित मिति : ६ असार २०७८, आईतवार १८:१३
मुन्धुमस्टार डटकम – पार्टी राजनीति र संसद्मा विपक्षीको भूमिकामा कमजोर देखिएको भन्दै आलोचित कांग्रेस सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशनमा पुनः सभापतिको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा नेताहरूबीचको अनौपचारिक बैठकमा व्यक्त गरेका छन् । उनले पछिल्लोपटक महाधिवेशनको मिति हेरफेर गरेलगत्तै आफ्नो समूहबाट सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेदवार बन्ने कसरत थालेका हुन् ।
शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संवैधानिक संकटको अवस्था भन्दै आगामी १६ देखि १९ भदौसम्म महाधिवेशनको मिति तोकेको थियो । अर्को दिन शनिबार देउवाले प्रदेशगत रूपमा निकट नेताहरूलाई बोलाएर पार्टीको सभापतिमा पुनः आफ्नो उम्मेदवारीबारे छलफल गरेका छन् । तल्ला तहमा आफ्नो समूहको अवस्था र महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी लिँदै देउवाले सभापतिमा लड्ने आंकक्षा व्यक्त गरेका हुन् ।
शनिबार देउवाले उपसभापतिद्वय निधि र विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापा र प्रदेश १ र २ का केन्द्रीय सदस्यसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका थिए । छलफलमा प्रदेश १ बाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भीष्मराज आङदेम्बे, मीन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, सुजाता परियार, डा. डिला संग्रौला, बाबुराम बस्नेतलगायत थिए भने प्रदेश २ बाट जंगीलाल राय र शम्भुलाल श्रेष्ठ सहभागी थिए ।
सो क्रममा नेताहरूसमक्ष देउवाले आफू पुनः पार्टीको सभापति बन्ने चाहना व्यक्त गरेको छलफलमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन् । देउवाले गुटबाट आफू सर्वसम्मत सभापतिको उम्मेदवार बन्ने वातावरण बनाउन नेताहरूसँग छलफल थालेको सहभागी एक नेताले बताए ।
उक्त छ्लफलमा देउबाले भने, कांग्रेसले संविधान जारी गरेपछि मेरो नेतृत्वमा संविधान कार्यान्वयनका काम सुरु भए । मैले तीन तहको चुनाव गराएँ । हामीले कम सिट जित्यौँ । तर, पहिलेभन्दा लोकप्रिय मत पाएका थियौँ । अब पार्टीलाई मुलुकको पहिलो पार्टी बनाउनुपर्नेछ । मुलुकलाई संविधान र लोकतन्त्रको बाटोमा हिँडाउनुपर्नेछ । त्यसैले एकपटक मैले नै सभापतिमा उम्मेदवारी दिने सोचेको छु । तपाईंहरूको राय के छ ? मलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधिले डेढ वर्षअघि नै देउवालाई भेटेर यसपटक आफूलाई सभापतिमा सघाउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नै गुटबाट उपसभापति निधिले सभापतिमै इच्छा देखाएपछि देउवामाथि दबाब छ । देउवाले भने उपसभापति निधिसँग यसपटक आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
तर, जवाफमा निधिले पनि यसपटक आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले तपाईंलाई सहयोग गर्दै आएकै छौँ । अब मेरो पनि उमेर भयो । भोलि १५औँ महाधिवेशनमा अरू साथी पनि आउँछन् । त्यो वेला अर्को परिस्थिति बनिसक्छ । त्यसैले अब मलाई मौका दिनुहोस् । म तपाईंको सहयोगमा सभापति बन्न चाहन्छु,’ निधिले भनेको उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य जंगीलाल रायले भने ।
त्यसपछि देउवाले पुनः सहयोगका लागि आग्रह गरे । ‘अझै छलफल गराैँ । अहिले तपाईं मलाई सघाउनुस् । होइन, त्यस्तो विचार छ भने मैले केही भन्नु छैन, तपाईं पनि लड्नुस्,’ देउवाले जवाफमा भनेका थिए । त्यसपछि निधिले पार्टीका अन्य नेताहरू पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको पक्षमा रहेको भन्दै सम्भव भएसम्म आफूलाई सघाउन, नभए यसपटक आफूले पनि नछाड्ने भनेका थिए । ‘मैले पहिले पनि तपाईंलाई भेटेर भनेको हुँ । म सभापति उठ्ने हो, सहयोग गर्नुस् । यतिन्जेल मैले तपाईंसँग रहेर सहयोग गरेकै हुँ । अब मैले तपाईंको सहयोग लिने वेला हो । नभए तपाईं पनि लड्नुस्, म पनि लड्छु,’ निधिले भनेका थिए । निधिले देउवालाई भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘पार्टीको सभापतिमा मलाई मौका दिनुस् । म पार्टी चलाउँछु । बरु तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्,’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।
त्यसपछि देउवाले पार्टीको सभापति जो पनि उठ्न पाउने बताएका थिए । ‘मैले गराएको चुनावमा पार्टीले हा¥यो । कोरोना र अन्य कारणले पार्टीलाई पनि वेलामा महाधिवेशनदेखि अरू काम राम्रोसँग गर्न पाइनँ,’ देउवालाई उद्धृत गर्दै अर्का नेताले भने, ‘पार्टीको सभापति त जो पनि उठ्न पाउँछ, मैले नउठ्नुस भन्दिनँ । तर, मैले पनि तयारी गरिसकेँ, मलाई सघाउनुस भन्ने मेरो कुरा हो ।’
पशुको खोप आफूहरूलाई दिइएको भन्दै मुद्दा दायर
अमेरिकाको अर्कान्सस राज्यको एउटा कारागारका कैदीहरूको एक समूहले घोडालाई जुका लागेको बेला दिइने इभरमेक्टिन नामक
कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्ड हराएमा के गर्ने ?
सरकारले यही माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिकस्थलमा प्रवेश गर्नका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य
काठमाडौँ: सत्तारूढ राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेको छ। तर यस
एक महिलाले आफूसँग यौनसम्पर्क राख्न झुटो विवरणको सहारा लिएको भन्दै २८ लाख डलर क्षतिपूर्तिको माग
जापानमा एक महिलाले आफूलाई गर्भवती बन्न सहयोग गर्ने वीर्यदाता पुरुषविरुद्ध क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर
प्रधानमन्त्री कप टी-२० को उपाधी एपिएफलाई
सशस्त्र प्रहरी बलको नेपाल एपिएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप टी-२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ।
घरभाडामा बस्नेसँग बढी महसुल लिएमा लाइन काटिने
घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिहरूसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने